Mark akashanda semutungamiri wepulpit paChechi yeAustinville yaKristu kubvira 1994. Ane zvikoro kubva kuYunivesiti ye Freed-Hardeman, Lipscomb University uye Reformed Seminary. Paaiva paFHU, ndiye akanga ari mupi weGuy N. Woods kudzidza kwekuparidza. Akadzidzisa dzidzo yekoroji zvidzidzo zveBhaibheri pa Bear Valley Bible Institute, International Christian College, uye Faulkner University. Akaita basa reumishinari muCaribbean Islands neEastern Europe. Anodzidzisa nekuparidza zvakanyanya muUkraine gore negore. Anoparidza mumisangano yevhangeri yechina kusvika kwechitanhatu uye anotaura pamusoro pehukama hwehama uye seminamato. Ndiye mutungamiri wekuMorgan County vhiki yeMaywood Christian Camp muHamilton, AL uye anoshumira pazano rezano. Anoshanda pamwe chete neLad to Leaders program.
Kukura Kwechinomwe Zvorudo!
Kuna Mwari ive Kubwinya-Zvinhu Zvikuru Zvaakaita!
Chikonzero Nei Tichifanira Kutya Mwari!
Nzira Yokuvaka Nesimba Kereke Yacho!